Ny Honor 20 dia amidy amin'ny fomba ofisialy any Espana | Androidsis
Roa volana lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Honor 20, miaraka amin'ny 20 Pro amin'ny hetsika any London. Ny avo lenta farany an'ny marika sinoa, nantsoina mba hahomby eo amin'ity sehatry ny tsena ity noho ny sandam-bola lehibe. Na dia hatreto aza ireo modely ireo dia tsy natomboka tany amin'ny magazay, ny ampahany dia noho ny toe-javatra ratsy an'i Huawei.
Nisy ny fanamarihana fa ny Honor 20 iHandeha eny amin'ny tsena aho tsy ho ela, angamba ny faran'ny volana Jona na ny voalohan'ny volana Jolay. Ary farany dia efa tanteraka ireo faminaniana ireo. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny telefaona, fotoana iray lehibe ho an'ny mpanamboatra sinoa.
Ity finday ity dia misy ny zava-drehetra hahatongavana amin'ny iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra amin'ity sehatry ny tsena ity. Fomba tsara, famolavolana lavaka ao amin'ny efijery tsara, ary vidiny tsara amin'ny vola. Satria misy vidiny ambany lavitra noho ny hitantsika amin'ny telefaona hafa ao anatin'ny elanelam-potoana avo lenta amin'ny Android.
Ny Honor 20 Lite dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
1 Fanamarihana Voninahitra 20
Fanamarihana Voninahitra 20
Ny Honor 20 dia lohalaharana amin'izany, raha mifantoka amin'ny toetrany isika. Ny marika sinoa dia mamela antsika maodely matanjaka, izay nandinihana manokana ireo fakantsary, mba hahitana tsaratsara kokoa amin'ny fotoana rehetra. Ny famolavolana dia tsy mahazatra amin'ny notch eo amin'ny efijery, miloka amin'ny lavaka, izay zavatra toa lamaody, saingy hatreto dia marika vitsivitsy no nampiasa. Ireto ny fiparitany:
SCREEN 6.26-inch FullHD + IPS LCD voavola miaraka amin'ny 2.340 x 1.080p (412 dpi) miaraka amin'ny tahan'ny 91.7%
ram LPDDR6x 4 GB
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 128 UFS 2.1
CHAMBERS Aoriana: 586 MP Sony IMX48 (f / 1.8) miaraka amin'ny OIS + 16 MP (f / 2.2) + 2 MP (f / 2.4) Zoro Ultra Wide ho an'ny sary makro + 2 MP (f / 2.4) maody fanaovana sary / Frontal: MP 32 (f / 2.0)
BATERA 3.750 mAh misy fiampangana haingana 22.5 W
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 9 Pie ambanin'ny Magic 2.1 UI
CONNECTIVITY Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 / USB 2.0 / GPS / A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS
ASA hafa Mpamaky ny dian-tanan-tsipika an-tsary / Famantaran-tarehy / USB-C / GPU Turbo 3.0 / Virtual Audio 9.1 Manodidina
DIMENSION SY lanjan'ny 154.25 x 73.97 x 7.87 mm sy 174 grama
Azontsika atao ny mahita fa avo lenta tanteraka izy io, miaraka amin'ny famaritana tsara amin'ny ankapobeny. Tonga ny Honor 20 miaraka amin'i Kirin 980, izay mamela antsika hiasa mahery sy mahery amin'ny fotoana rehetra, zavatra tena ilaina amin'ny finday avo lenta. Ny fakan-tsary dia iray amin'ireo tanjany, miaraka amina sensor efatra ao aoriana. Ho fanampin'izany, ny fakantsary dia ampiasain'ny faharanitan-tsaina artifisialy, hamantarana ny seho ary manana fomba fakana sary amin'ny telefaona amin'ny fotoana rehetra. Ny sensor sensor dia nampidirina tao amin'ny efijery, toy ny mahazatra amin'ity fizarana tsena ity.
Ny Honor 20 dia natomboka tamina fitambarana RAM sy fitehirizana eny an-tsena, izay 6/128 GB, araka ny efa hitantsika tao amin'ny mombamomba azy. Ireo liana amin'ny fividianana ny marika avo lenta sinoa dia afaka manao izany ankehitriny, na amin'ny fivarotana an-tserasera na ara-batana. Afaka mahita izany isika amin'ireo mpizara mahazatra, toy ny Fnac, Worten, MediaMarkt, Amazon, Tranon-telefaona, PC Components ary El Corte Inglés. Ho fanampin'izay, antenaina fa halefa ao amin'ny katalaogin'i Orange sy Yoigo izy io atsy ho atsy, angamba amin'ny volana aogositra ho ofisialy amin'ity raharaha ity.
Mikasika ny vidiny, satria efa nambara tamin'ny fanolorana azy tamin'ny Mey, tonga ny Honor 20 miaraka amin'ny vidiny 499 euro any Espana. Ka maodely azo idirana tokoa ao anatin'io tandavan Android avo lenta io. Ity dia zavatra iray izay azo antoka fa hanampy an'ity telefaona ity hanana varotra tsara eny an-tsena. Miaraka amin'ity vidiny ity dia azo antoka fa. Amin'izao fotoana izao dia hisy loko roa azontsika vidiana telefaona, izay no hitantsika tamin'ny fampisehoana azy: Midnight Black sy Sapphire Blue, satria ny loko maitso sy volomparasy dia natokana ho an'ny maodely Pro amin'ity faritra ity. Tsy fantatsika raha mbola hisy safidy hafa, na dia toa tsy izany aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Honor 20 dia efa misy any Espana ankehitriny
Ny Android Q beta dia manana fihetsika vaovao hanokafana ny Google Assistant